कसरी हुन्छ एटिएम ह्याकिङ ! एटिएम ह्याकिङका मुख्य दोषी को ?
नेपालमा एउटा अत्यन्तै डर लाग्दो घटना हालै भएको छ । त्यो हो एटिएमह्याक । यसले बैंकर र बैंकको सफ्ट्वेयर सेक्यूरेटीका बारेमा प्रश्न मात्रै उठेको छैन । बैंकहरुको एटिएम सुरक्षा माथी पनि प्रश्न उठेको छ । एक सीइओले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, २८ वाणिज्य बैंक मध्ये १२÷१५ वटा बाहेक सबैको बैकिङ्ग सफ्ट्वेयर नक्कली छ । कम मुल्यको छ । केही बैंकहरुले हालै ‘फिनाकल–१०’ जस्ता राम्रा सफ्ट्वेयर चलाएका छन् । नक्कली सफ्ट्वेयर भएका बैंकहरुमा फेरि भोली अर्को काण्ड नहोला भन्न सकिदैन । उनीले प्रस्टै भने, अधिकाशं बैंकको एटिएम मेसिन र कार्ड नै चीनका कम्पनीहरुले बनाएका छन् । सस्ता छन् । कमिशन खाएर नेपाल ल्याएका छन् । यी मेसिन र कार्डबाट ग्राहकले विश्वास गर्ने ठाँउ नै छैन ।
चिनीयाँ ह्याकरहरुले भारत, स्पेन, हङकङ जस्ता विकसित देशमा एटिएम ह्याक गरी अरबौं पैसा चोरी गर्न सफल भएका घटना हामीले सुन्न र पढ्न पायौं । तर, त्यही चिनीयाँ ह्याकरहरुले नेपालबाट एटिएम ह्याक गरी रकम चोरी गरी लैजान पाएनन् । यो खुशीकै पक्ष मानिन्छ । यो नेपाल प्रहरी र बैंकहरुकै सूचनाले बचेको होला । तर, लाखौं पैसा मेसिनमा राखी रातभरी छाडा गाईबस्तु जस्तै गरी छोडिदिने, सुरक्षा नगर्ने, गार्ड नराख्ने, यो चाँही कस्तो बैकिङ्ग हो ? पैसा असुल गरी काम गर्ने नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) कै कारण वा कमजोरीले पैसा चोरी भएको भए उसलाई किन कारवाही नगर्ने ? यो प्रश्न अहिले बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
अहिले सुनिन्छ नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)मा आवद्ध भएका ११ वाणिज्य बैंकका एटिएम प्रयोग गरी करोडौं पैसा एटिएमबाट चोरिएको छ । ७ वटा विकास बैंक नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)संग आवद्ध छन् भनिएको छ ।
यो खुशीकै पक्ष मानिन्छ । यो नेपाल प्रहरी र बैंकहरुकै सूचनाले बचेको होला । तर, लाखौं पैसा मेसिनमा राखी रातभरी छाडा गाईबस्तु जस्तै गरी छोडिदिने, सुरक्षा नगर्ने, गार्ड नराख्ने, यो चाँही कस्तो बैकिङ्ग हो ? पैसा असुल गरी काम गर्ने नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) कै कारण वा कमजोरीले पैसा चोरी भएको भए उसलाई किन कारवाही नगर्ने ? यो प्रश्न अहिले बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
चिनीया ह्यारको डलर साट्नेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने । तर, पैसा दिन अनुमति दिने नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का सीइओ क्षेत्रीलाई र सञ्चालकहरुलाई किन कारवाही नगर्ने ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरनजीवी नेपाल भनिरहेका छन्, आफ्नो पद र प्रतिष्ठा जोगाउन शक्ति केन्द्र धाउने सीइओ साबहरुले पैसाको सुरक्षा आफै गर्न सक्नुपर्दछ । उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने पद र प्रतिष्ठा शक्तिकेन्द्र धाउँदा जोगिन्छ । तर, पैसा एटिएम भित्रैबाट हराउँछ । एटिएम रातारात ह्याक हुन्छ । यो जोगाउने काम सीइओहरुको हो कि होइन ? जनताको पैसा बढाउने, सुरक्षित गर्ने, समयमा दिने, कर्जा दिने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्ने र उच्च जोखिम बहन गर्ने भएकोले सीइओ साबहरुलाई सञ्चालकहरुले करोडौंको गाडी र लाखौं मासिक भत्ता दिएको होला नि ! त्यसकारण बैंकमा पुगेको पैसाको जिम्मा अब बैंकका सीइओ र सञ्चालकले नै लिन पर्दछ कि पर्दैन ? घटना भएपछि अर्को कम्पनीको कारण भएको हो भन्दै पन्छिन मिल्दैन । यो सरासर गैरजिम्मेवार कुरा भएन र ? यो प्रश्मा छलफल र बहस किन नगर्ने ?
चिनीयाँ ह्याकहरुले विश्वका अधिकाशं देशमा यस्तो एटिएम ह्याक गरी पैसा चोरी गरेको घटना दिन प्रतिदिन आएका छन् ।
यस्तो नेपालमा होला भन्ने ज्ञान बैंकका सीइओ र नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का मालिकहरुलाई हुनु जरुरी हुन्छ की हुँदैन ? त्यसकारण नेपाल प्रहरीले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)का सीइओ क्षेत्री र एटिएम कार्ड प्रयोग भएका बैंकहरुका सीइओहरु माथि तत्कालै अनुसन्धान गरिनु जरुरी देखिन्छ । स्मरणीय के छ भने नेप्सको आफ्नै आधिकारिक अनलाइन समेत सेक्युर देखिदैन ।
लेखकः नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय लेखा समिति सदस्य छन् ।
कोभिड १९ को जटिल समयमा देश तथा विदेशमा दिन प्रतिदिन…
यतिबेला एकैसाथ हिटलर, मुसोलिनी र केपी ओलीको याद आयो ।…